Marc Ravalomanana : Fihodinana faharoa -
AccueilRaharaham-pirenenaMarc Ravalomanana : Fihodinana faharoa
08/11/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nanjakan’ny kandidà laharana faha 25 Marc Ravalomanana ny vokam-pifidianana, hatramin’ izao ora hanoratana izao. Raha ny vokatra vonjy maika azo tamina biraom-pandatsaham-bato miisa 318 amin’ ireo 24 852, dia mitarika amin’ ny salan’isa 50,73% ny kandida Marc Ravalomanana. Manaraka azy aoriana kosa i Andry Rajoelina izay nahazo vato 35 033, ary manana salan’isa 38,73 %. Marihana fa miisa 97 524 ny isan’ny mpifidy voasoratra anarana, ka 93 749 no nandatsa bato, vato maty sy vato fotsy amin’ireo kosa dia 3 775. Marihana fa nitazona ny laharana voaloha hatrany ity kandidà laharana faha 25 ity, teto Antananarivo sy Antsirabe ary ny faritra Itasy sy Bongolava. Ho an’ ny biraom-pifidianana teto Antananarivo izao dia nanjaka i Marc Ravalomanana tamin’ ireo biraom-pifidianana notsidihana. Tahaka ny tetsy amin’ ny EPP Vohibola tamin’ ireo biraom-pifidianana dimy tao aminy izao, dia nahazo vato miisa 724 ny kandidà laharana faha 25 tamin’ ireo mpifidy 1444.
Manoloana ireo vokatra azo ireo dia nifamotoana tetsy amin’ ny Qg Bel’air ny antoko TIM sy ireo mpanohana an’i Marc Ravalomanana, tonga teny an-toerana ihany koa ny kandidà tohanan’izy ireo. Tamin’ izany no nanambaran’ity farany fa “ lany dada an”, ho azy mantsy dia efa ampelatanana ny fandresana manoloana ireo vokatra eo ampelatanany. Sahy nilaza ny kandidà Marc Ravalomanana fa “ raha izao zava misy izao, dia mino ao fa toa tsy hisy intsony ny deuxieme tour” hoy izy. Nambaran’ny kandidà laharana faha 25 ihany koa, fa mahatoky ny tenany fa miverina aminy ny fahatokisan’ny vahoaka. Noho izany dia nanentana ny mpanara-dia azy i Marc Ravalomanana, mba ho mailo sy ho tony satria tsy kely lalàna ny ratsy hoy izy. Tokana ny tanjona hoy Ravalomanana Marc “handresy isika minoa ianareo ahy”.
Manana ny fitaovana arifomba ny kandidà Marc Ravalomanana hanarahana sy hanangonana ny vokam-pifidianana etsy amin’ ny Qg an’izy ireo etsy Bel’air, nanome fe-potoana noho izany ny kandidà Ravalomanana laharana faha 25 fa rahampitso amin’ ny valo ora fara fahatarany dia ho azon’ izy ireo ny vokam-pifidianana manerana an’i Madagasikara. Ankotran’ireo fitaovana hanangonana ny vokam-pifidianana, dia efa mihatrana ihany koa ireo mpahay lalàna. Izy ireo indray dia hiandraikitra manokana ny lafiny lalàna, ka raha misy ny fitoriana tokony ho atao dia tsy miandry ela izany. Ireo rehetra ireo no anton’ nilazan’i Marc Ravalomanana fa “ny fiandrasana ny vokam-pifidianana, dia ataon-tsika tahaka ny miandry…..hainareo tsara”. Manoloana io tenin’dRavalomanana Marc io, dia maro amin’ ireo mpomba azy, no milaza ny hijanona hiandry ny vokatra etsy Bel’air.
Voaporofo ankehitriny fa mbola manana ny toerany indrindra amin’ny sehatra ara-politika eto amin’ny firenena i Marc Ravaloomanana. Nasehon’ireo mpomba azy tao anatin’izao fifidianana izao fa mbola maro mpanaraka ny tenany na dia somary nangingina aza hatramin’ny taona 2009 izay nanonganan’Andry Rajoelina azy, noho ny fampiasana herim-pamoretana natao azy ireo tamin’izany fotoana izany. Tsiahivina mantsy fa nampiasa ireo mpitandro filaminana izay teo ambany fahefana hatrany ny filohan’ny tetezamita tamin’izany fotoana izany ka nahatonga ireo mpomba an’i Marc Ravalomanana nifitsaka sy voatery nampangina ny fanehoan-keviny, hany ka nangina moramora ny hetsika notaterahina teny amin’ny fianjan’ny Magros tamin’izany. Folo taona aty aoriana, naneho ny heriny ireto mpanohana ny filoha Marc Ravalomanana ireto. Tsy ireo teto Antananarivo ihany anefa fa nanerana an ‘i Madagasikara mihitsy, ary dia iza o nahitam-bokatra izao. Azo antoka fa mbola ho
Araka ny efa fantatra, dia nifarana ny fe-potoam-piasan’ny ambasadaoron’ny vondrona Eoropeanina, Benedito Sanchez, teto Madagasikara. Marihina fa ny taona 2014 izy no tonga teto amin’ny firenena ary niasa nandritra ny efa-taona. Noho izay indrindra, taorian’ny ...Tohiny